အချစ်နဲ့လိင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Poetry » အချစ်နဲ့လိင်
Posted by ကိုေပါက္(မႏၱေလး) on May 16, 2011 in Poetry | 10 comments
တဏှာဆိုတာနဲ့ ဘဲ တွယ်ညိတတ် ပါတယ်”လို့
ခပ်ရဲရဲဖွင့်ဆိုတော့ ဖတ်မိတဲ့ အနောက်ဆန်သူများက
တစ်ချိုု့သော ဝါဒခပ်ကြမ်းကြမ်း လက်ခံသူများကတော့လည်း
ချုစ်ဗျုဟာကျင်းခွင့်ရ ဘို့ အတွက်
မြူဆွယ်တာပါ လို့ မညှာမတာ ဆိုလာပြန်ပါတယ်။
စုံမက်လို့ ချစ်ခင် မြတ်နိုးသက်ဝင်သူကို
အချစ်ကို နှစ်သက်စဖွယ်လို့ ဖက်တွယ်ထားသူများကလဲ
ရမ္မက်နဲ့အိပ်စက်ခြင်းက သာမည ပါတဲ့။
သင်ကော ဘယ်ဘက်ကပါချင်ပါသလဲ ?
(အရှုံးသမားရဲ့ အိုဘယ့်မိန်းမသား ကို ဖတ်လိုက်ရတဲ့အခါ ဒီအတွေးလေး ထွက်လာပါတယ်)
အချစ်နဲ့လိင်ဟာ ဒွန်တွဲနေတယ်ပဲ ထင်ပါတယ်.. ချစ်ခြင်းသီးသန့်ဖြစ်တည်မှုနဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ကိုချစ်ရင် ကြာရင် ပျင်းရိငြီးငွေ့သွားတတ်ပါတယ်.. ဖို/မ သဘာဝ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရှိမှသာ ပိုမို ခိုင်မြဲကြမယ်ထင်ပါတယ်.. ရှာမှ ရှားတဲ့ ချစ်ခြင်းသီးသန့်သာခံစားတတ်သူတွေတော့ရှိပါတယ်.. အများအားဖြင့်တော့ အဲဒီအရာကြောင့်ပဲ တည်မြဲနေနိုင်တာပါ.. အိမ်ထောင်ကျပြီးရင် ပိုသိသာပါတယ်.. လင်ယောကျာ်းနဲ့ ဝေးလဲ ဝေးနေရမယ်၊ ဆိတ်ကွယ်ရာလဲဖြစ်မယ်၊ လွတ်လွတ်လပ်လပ် နေထိုင်ခွင့်ရနေတယ်ဆိုတဲ့ မိန်းမသား၊ ပေါ်တင်သာ မလုပ်ရင်မလုပ်မယ်၊ ခိုးတော့ လုပ်နေကြတာပါပဲ..
ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတစ်ယောက်ကို သူလိုချင်တာ ဘယ်အရာမဆို ဖြည့်စွမ်းပေးနေနိုင်မှ သူ့ကို ကိုယ့်နားမှာ ရေရှည် ဆွဲထားနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်.. ချစ်ခြင်းကြောင့်တွေ၊ သံယောဇဉ်သီးသန့်နဲ့ ချစ်တာပါဆိုတဲ့သူတွေကို ကျွန်တော်ကတော့ ဟောလို ရဲ ရဲကြီး စိန်ခေါ်ဝန့်သဗျာ
“ဘယ်လောက်ထိ စမ်းသပ်ခံဝန့်လဲ” လို့
ရိုးသားတဲ့သူဆိုတာ လူမလစ်လို့ မခိုးဘဲနေတဲ့သူကို မဆိုလိုပါဘူး။ အခြေအနေပေးနေတာတောင်မှ မခိုးတဲ့သူသာ ရိုးသားတဲ့သူသက်သက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ အချစ်ဆိုတာကို အဲလိုပဲ ကိုးလိုးကန့်လန့်၊ ဂွကျကျ မြင်တတ်ပါတယ်။
ရောင်စဉ် ခုနှစ်သွယ်ပေါင်းမှ သက်တံ့ ရယ်လိုဖြစ်လာတာ တစ်မျိုးစီ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနေလို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်…။ အချစ်ဟာ အချစ်ပေါ့ဗျာ….။ ဟိုသီချင်းလေးတောင်ရှိသားပဲ…။ ဘာတဲ့ ” အချစ်ဟာ….. ချစ်လို့ …… ချစ်ကြတယ်တဲ့” လေ…
hmee က ဒီလိုဆိုတယ်ဗျ
“အိမ်ထောင်ပြုတယ်ဆိုတာ တဏှာ ဆိုတာထက် အများကြီးပိုတယ်နော်။”
မှန်ပါတယ် အိမ်ထောင်ပြုတယ်ဆိုတာ Sex တခုထဲ အတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ လူ ့သဘာဝအရ ဖိုနဲ ့မ ပေါင်းဖက်ပြီး
နောက်မျိုးဆက်ကို ဆက်လက်ပွားပေးဖို ့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီအပြင် လူဆိုတာ အသိုက်အဝန်းနဲ့နေတဲ့ သဘာဝ
တရားပါ။ အသိုက်အဝန်းကို မှ ထပ်ပြီး အနုစိတ်လိုက်ရင် ကိုယ်ပိုင် မိသားစု အသိုက်အဝန်းက ထပ်ဖြစ်လာပါတယ်။
“တကယ်တော့ သံယောဇဉ်က အဓိကြတယ်နော်။”
သံယောဇဉ် ဆိုတာဟာ တပ်မက်မှု၊ စွဲလန်းမှု တဏှာပါ။ ဒါဆိုရင် တပ်မက်မှု စွဲလမ်းမှု တဏှာစိတ်ဟာ အဓိကျတယ်
လို့ဝန်ခံထားပါတယ်။
“တဏှာကို အရင်းခံတယ် ဆိုရင် အဲ့ဒီ့ အိမ်ထောင်မမြဲလောက်ဘူး။”
တဖန်…တဏှာကို အရင်းခံတယ် ဆိုရင် အိမ်ထောင် မမြဲနိုင်ဘူး ဆိုတဲ့ အတွေးဟာ ရှေ ့နောက် မညီညွတ်ပါဘူး။
နောက်ပြီးတော့ တဏှာ (လိင်ဆက်ဆံခြင်းသာ မက အခြားသော အကြောင်းအရာအားလုံးပါဝင်) မပါပဲ အိမ်ထောင်
မမြဲနိုင်ပါဘူး။ ကျားသဘာဝ အရဆိုရင်လည်း တဏှာစိတ် မရှိပဲ Erect မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ Erect မဖြစ်ပဲ လိင်ဆက်ဆံ
လို ့မရပါဘူး။ လိင် မဆက်ဆံပဲ နဲ့မျိုးဆက် မပွားနိုင်ပါဘူး( မဆက်ဆံပဲ မျိုးတည်စေခြင်းမပါဝင်)။
ဒါကြောင့် ကမာ္ဘ ပေါ်မှာ ရှိတဲ့ လူသားအားလုံးဟာ တဏှာ အရင်းခံတဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှုကနေ မျိုးဆက်သစ်တွေ
ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာ ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အပါအဝင်ပါ။ မိန်းမ သဘာဝ အရကြည့်မယ် ဆိုရင်လည်း
သာယာမှုဆိုတာ ချွင်းချက်မရှိဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။ လင်မယားချင်း ဆိုးဝါးတဲ့ လူမှုရေး ပြသာနာတွေ မရှိခဲ့ရင်ပေါ့လေ။
မိန်းမတွေဟာ အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆန္ဒကို ထုတ်ဖော် မပြောကြပါဘူး။ ယောကျာ်းဖြစ်သူက စတင်လာရင်
ချစ်တဲ့ စိတ်ကြောင့် သူ ့အလိုကိုလိုက်လျောတာပါ။ ဒါမလုပ်လဲ ဖြစ်ပါတယ် လို့အချို ့အချို ့က နာမည်ကောင်း
ယူတတ်ပါတယ်။ မသာယာဘူးဆိုရင် မိမိ၏ အမျိုးသမီးပင်ဖြစ်စေ ဆက်ဆံဖို့အဆင်မပြေကြောင်းကို လူတိုင်းသိ
“ဘာလို့လဲဆိုတော့ တချို့အိမ်ထောင်တွေမှာ သွေးသားဆူဖြိုးတဲ့ အရွယ်ဖြစ်ပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်
ကြင်ကြင်နာနာ တဏှာကို ဦးစားမပေးပဲ မောင်နှမတွေလို နေတဲ့သူတွေရှိတယ်နော်။ ”
ဒီ အကြောင်းအရာဟာ ကျွန်တော့ အတွက် သဘာဝမဆန်တဲ့ အကြောင်းအရာလို ့ယူဆပါတယ်။
မောင်နှမတွေ လိင်မဆက်ဆံကြပါဘူး။ လိင်တော့ ဆက်ဆံပြီး တဏှာကို ဦးစားမပေးတဲ့ မောင်နှမလို နေတဲ့
သူတွေဆိုတာဟာ အတော် စဉ်းစားရခက်ပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ ့တစ်ယောက် ကြင်ကြင်နာနာ ဆိုတာကို
ဖြစ်ပေါ်ဖို ့ဘယ်ကစသလဲ ဆိုတော့ တပ်မက် စွဲလမ်းမှု တဏှာဆိုတာက ပဲ စ ပါတယ်။
ဆိုတော့ ဂျာအေး သူ ့အမေရိုက် ဖြစ်နေသလားပဲ။
“အလှအပကြောင့်ဆိုရင်လည်း အလှဆိုတာ စပါးစေ့ တထောက်စာပဲရှိတာမို. အသက် ၄ဝ ကျော်တာနဲ့ပျက်ပြီလေ။
ဒါပေမဲ့ အဖိုးကြီး၊ အဖွားကြီး ဖြစ်ချိန်ထိ ချစ်ချစ်ခင်ခင် ကြင်နာနေတာတွေ ရှိတယ်နော်။”
စိတ်ပညာ သဘောတရား အရ လူတွေဟာ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာလေ အဖော် အပေါင်း မိတ်ဆွေ အသိုင်း
အဝိုင်း အသစ်ကို ရှာဖွေမှု မပြုလုပ်တော့လေဆိုတာကို အသက် ၃ဝ ကျော် အရွယ်မှာ စတင် ခံစား သိရှိလာပါလိမ့်
မယ်။ လူတွေ အသက်ကြီးလာရင် မိမိရဲ ့မိသားစု၊ မိတ်ဆွေဟောင်း အပေါင်း အသင်းဟောင်းတွေကိုပဲ ပိုမို
နီးကပ်စွာ ထိတွေ ့လာချင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အသက်အရွယ်ကြီးမြင့်လာတာနဲ ့အမျှ ငယ်ပေါင်း ဖြစ်ခဲ့တဲ့ မိမိရဲ ့
လင် ၊ မယားဟာ မိမိ အတွက် အကောင်းဆုံး အဖော်မွန်ပါပဲ။ တဏှာစိတ်ဆိုတာ အဲဒီ အသက်အရွယ် အထိ
ကို ရှိနေဆဲပဲ ဖြဟ်ပါတယ်။ အဲဒီ တဏှာဟာ အိုမင်းရင့်ရော်လာတဲ့ ခန္ဒာကိုယ်က တပ်မက်မှုက နည်းပါးလာပေမဲ့
အိုမင်းရင့်ယော်လာတဲ့ စိတ်ဟာ တပ်မက်မှု ပိုအားကောင်းလာတတ်ပါတယ်။ လိင်ဆက်ဆံတဲ့ တဏှာထက်စာရင်
တော့ အနည်းငယ် သန် ့စင်တယ်လို ့ပြောလို ့ရပေမဲ့ အဲဒီဟာ လည်းပဲ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာရင် ဖြစ်ပေါ်တတ်
တဲ့ အကြောက်တရားကို အခြေခံပါတယ်။ နာမည် အမျိုးမျိုး တပ် နိုင်တဲ့ အကြောက် တရားဟာ အဖိုးကြီးပျောက်ရင်
အဖွားကြီး ဒေါင်ချာဆိုင်း ၊ အဖွားကြီး ပျောက်ရင် အဖိုးကြီး ဆောက်တည်ရာမရ မျက်စိအောက်က အပျောက်မခံနိုင်
တာတွေဟာ လူတွေအားလုံးက အချစ်လို့အမည်တပ်ထားတဲ့ နောက်ကွယ် က စိတ်ပညာ သဘောတွေပါပဲ။
တိုက်ခိုက်တာ မဟုတ်ပါ ဆွေးနွေးခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
nigimi77 ရေ အဲဒီနေ့က nigimi77 ရဲ့ ကွန်မန့် က နဲနဲကြမ်းသလားလို့ပါ။ အဲဒါကြောင့် မှီက ရေးပြတာပါ။ အခု ရှင်းပြထားတာတွေလည်း မှန်ပါတယ်။ တကယ်ကို အရင်းစစ်ပြီး နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် တကယ့်အမှန်တွေ ဆိုတာ မှီ လက်ခံပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရေးမှာ အဲဒါလည်းမပါမဖြစ် ဆိုတာလက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တချု့ိတွေဟာ အဲ့ဒါကို ဦးစားမပေးကြဘူးလို့ မှီကဆိုလိုတာပါ။ ဒါပေမဲ့ (လ) စာလုံးကိုမှီမရေးပဲ တဏှာလို့ လွှဲသုံးတာက ရိုင်းမှာဆိုးလို့ပါ။ တရွာထဲနေတဲ့ မောင်နှမတွေပဲ စိတ်ဆိုးရဘူးလေ။
အသက်ရှိတဲ့ သတ္တဝါတွေထဲမတော့ ..လူဟာ..တော်တော်လိင်စိတ်သည်းထန်တယ် ပြောရမှာပဲ..။
ဘယ်နှယ် ခွေးကမှ.. တော်သလင်းလလောက်မှ..ထကြတာရယ်.. လူမှာက အချိန်မရွေး..အသက်မရွေးလေ..။
Masturbation ကလည်း..တခြားအကောင်ဘလောင်တွေမှာ.. သိပ်မကြားဘူးပါ..။
လူသားဥိးရေဟာ.. ဒီမြေကမ္ဘာမှာ.. ရဘီလီယန်နားကပ်နေပြီ..။ ကိုယ်အလေးချိန်နဲ့သာ..ချိန်စက်ရရင်.. အများဆုံးသတ္တဝါတမျိုးဖြစ်နေလောက်ပါပြီ..။
အချစ်–> လိင်စိတ် —> မျိုးပွား ဆိုတာ.. နိယာမလို့မြင်ပါကြောင်း…။
ဒီဦးလေးကြီးတွေ ဘာတွေရေးမှန်းမသိဘူး။ ကလေးတွေရှေ့မှာနော်….
Hmee ရေ စိတ်မဆိုးပါဘူး။ ကျွန်တော်က ဒီလိုရေးတာကို စိတ်ဆိုးမှာ စိုးရိမ်တာပါ။ တိုက်ခိုက်တာမျိုး မဟုတ်ဘူး
ဆိုတာကိုလဲ နားလည်ပေးပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သူ ့အမြင် ကိုယ့် အမြင် ဖလှယ်ရတာ တော်တော် အကျိုးရှိပါတယ်။
ကျုပ်ကတော့ လိင်ကဦးဆောင်တယ်ဆို ကန့်ကွက်သဗျာ။
စိတ်ပိုင်းဆို်င်ရာလို့ပြောတဲ့သူကတော့ ဘယ်လွဲမလဲ .. ဒါက စိတ်ကိုအခြေခံတာကိုး။
Mas… ဆိုတာကလဲ လိမ္မာတဲ့ လူယဉ်ကျေးတွေ လုပ်ကြတာပါ။
အဲဒါကို အကောင်အထည်ဖော်ရင် တရိစ္ဆန်ဖြစ်သွားမှာပေါ့။
အဲဒါကိုနားလည်တယ်ဆိုရင် အချစ်ဆိုတာ အဲလိုအဓိပါယ်နီးစပ်တဲ့ အရာတွေအများကြီးရှိသဗျ။ (ရေးတေးတေးနားလည်နိုင်ပါစေ)
လိင်ဆက်ဆံတာတောင် မျိုးဆက်ပြန့်ပွားဘို့ အတွက်ဆက်ဆံတာမျိုးသည် သန့်ရှင်းတယ်ဆိုလားပဲ။)
လိင်ဆိုတဲ့စကားလုံးက ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဓိကထားသူတွေအတွက်ပဲ သင့်တော်ပါတယ်။